Laharana antsoina raha mila vonjy:50 15
"Izaho no Andriamanitra, dia Andriamanitrao." Salamo 50:7
"Antsoy Aho amin’ny andro fahoriana; dia hamonjy ana Aho, ka hanome voninahitra Ahy ianao" Salamo 50:15
Any amin’ny firenena eoropeana mari do any 112 no laharana antso maika. Maimaimpoana izy io, ary azo antsoina amin’ny finday koa na dia tsy misy fahana aza. Laharana antso maika tokoa izy ity!
Andriamanitra Mpahary antsika koa dia nametraka laharana antso vonjy ho antsika, dia ny 50 15, izany hoe ny ”Antsoy Aho amin’ny andro fahoriana”. Manaraka izany, tsy milaza Izy hoe: angamba Aho mety ho afaka hanampy anao. Tsia, fa ambarany mafy hoe: “hamonjy anao Aho”. Tsy misy toe-javatra tsy azony idirana, tsy misy zavatra ilaina tsy hainy valiana. Saingy tsy maintsy avelantsika hiasa Izy, araka ny fahalalany lavorary, amin’ny fahatsiarovana fa izay mahasoa ireo matoky Azy no katsahiny mandrakariva.
Tsy maintsy amin’ireo miantso an’Andriamanitra an-kitsimpo no tsy valiany, na tsy ampiany, na tsy vonjeny. Taomina ny tsirairay hitondra eo amin’Andriamanitra ny fahoriany rehetra, na dia izay lalina indrindra aza, dia ilay ateraky ny fahatsapana fa nanota. Andriamanitra dia hamaly vavaka izay miantso Azy am-pinoana. Tonga tety an-tany Jesosy Kristy Zanany hampihavana sy hanome fiadanana ireo rehetra mino Azy. Izy mihitsy no miteny amintsika hoe: “Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo” (Jaona 14:27). Any amin’ny firenena eoropeana maro dia any 112 no laharana antso maika. Maimaimpoana izy io, ary azo antsoina amin’ny finday koa na dia tsy misy fahana aza. Laharana antso maika tokoa izy ity!
Tsy maintsy amin’ireo miantso an’Andriamanitra an-kitsimpo no tsy valiany, na tsy ampiany, na tsy vonjeny. Taomina ny tsirairay hitondra eo amin’Andriamanitra ny fahoriany rehetra, na dia izay lalina indrindra aza, dia ilay ateraky ny fahatsapana fa nanota. Andriamanitra dia hamaly vavaka izay miantso Azy am-pinoana. Tonga tety an-tany Jesosy Kristy Zanany hampihavana sy hanome fiadanana ireo rehetra mino Azy. Izy mihitsy no miteny amintsika hoe: “Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo” (Jaona 14:27).